स्ट्रबेरी प्रकाश फोम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मिठाई8 मिनेट4 व्यक्ति65२ क्यालोरी
यो प्रकाश स्ट्रबेरी फोम सँधै चकित हुन्छ। मात्र संग Ingredients सामग्री र minutes मिनेट हामीसंग कुनै अवसरको लागि उत्तम मिठाई हुनेछ।
थप रूपमा, तपाई कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न कि के फैलिरहेको छ। मैले सूचित गर्ने रकमको साथ, or वा serv सर्भिंगहरू बाहिर आउँदछन्। यसका अतिरिक्त सरल र छिटो किफायती छ।
मलाई यो मिठाई मनपर्ने अर्को कारण गन्धको कारण हो। जब तपाईं गिलास खोल्नुहुन्छ यसको गन्ध आउँछ जेली बीन र, त्यसको लगत्तै तपाईलाई थाहा छ कि तपाई मिठाई यो एक सफलता हुन गइरहेको छ।
1 हल्का स्ट्रबेरी फोम
2 के तपाइँ प्रकाश स्ट्रबबेरी फोमको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
केवल ingredients अवयवहरूसँग जिफिफमा बनाइएको स्वादिष्ट मिठाई।
१ g० ग्राम फ्रिज स्ट्रबेरी
G० ग्राम बिर्च चिनी वा xylitol
निम्बूको रस को एक ड्यास
हामीले गर्ने पहिलो चीज भनेको प्रोग्रामिंग द्वारा बिर्च चिनीलाई हलुका बनाउनु हो १ seconds सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 15-5-१०। हामी ब्लेड तिर धूलो कम।
स्ट्रफबेरीलाई डिफ्रोस्ट नगरी थप्नुहोस्, तिनीहरूलाई कागतीको रसको साथ छर्कनुहोस् र यस समयमा क्रश गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति 30। यो सम्भव छ कि क्रसिंगको बखत स्ट्रबेरी गिलासमा टाँसिएर रहनेछ, यस अवस्थामा, हामी मेशिन रोक्नेछौं, ब्लेड तर्फ मिश्रण घटाउनेछौं र समय नआएसम्म जारी रहन्छ।
अर्को, हामी ब्लेडमा पुतली राख्छौं। अंडा सेतो जोड्नुहोस् र को लागी पीट Minutes मिनेट, गति २।
समयको अन्त्यमा, हामी छनौट भएका कन्टेनरहरूमा छिटो प्रकाश फोम वितरण गर्दछौं र ढिला नगरी सेवा दिन्छौं।
के तपाइँ प्रकाश स्ट्रबबेरी फोमको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
यो किन उज्यालो छ? धेरै कारणका लागि; पहिलो उनको लागि मूस बनावट र दोस्रो किनभने प्रयोग गर्दा सेतो चिनीको सट्टा xylitol हामी प्रति सेवा cal० क्यालोरी घटाईरहेका छौं। अविश्वसनीय सत्य ?.
आज हामीले स्ट्रबेरीको प्रकाश फोम बनाएका छौं यो रास्पबेरी र आमसँग पनि स्वादिष्ट हुन्छ।
यो मिठाई अग्रिम मा बनाउन सकिन्छ तर जब यो घण्टा जान्छ यसले आवाज गुमाउँछ। त्यसैले यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यो तयार गर्नुहोस् अन्तिम क्षण मा
तपाईं फोटोमा जस्तै चश्मा सजाउन चाहनुहुन्छ भने एक छ अचूक युक्ति: अण्डा सेतो संग गिलासको रिम हल्का भिजेको। अर्को, चिनीलाई प्लेटमा राख्नुहोस् र गिलासलाई रिमले तल राख्नुहोस् ताकि यसलाई चिनीसँग राम्ररी लेप गरिएको होस्। तपाईं देख्नुहुन्छ कसरी यो अडी रहन्छ र सार्न पनि छैन।
तपाईं केहि छाता पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो ककटेल वा केहि हो पुदीना पातहरू यसलाई रंगको टच दिन।
थप जानकारी - घरेलु फल र आगर जेली बीन्स
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: स्वस्थकर खाना, सजिलो, १ 15 मिनेट भन्दा कम, Postres
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » हल्का स्ट्रबेरी फोम
Sandra क्रूरता भन्यो
म एक महिला हुँ जसले औषधीको सहायताले वजन घटाउन हजार पटक प्रयास गरिसक्यो, तर कहिले सम्म कुनै नतिजा प्राप्त भएको छैन। मैले गत २ बर्षमा करीव kil० किलोग्राम प्राप्त गरेको थिएँ र मैले एकदम डरलाग्दो महसुस गरें। मैले धेरै चीजहरू वजन कम गर्न प्रयास गरेको छु, तर दुर्भाग्यवस मेरा नतिजाहरू जहिले पनि मेरो अपेक्षाहरूबाट टाढा आएका छन्। यदि शरीरले बोसो जलाउन चाहँदैन भने, न खेल र न डाइटले सहयोग गर्दैन। र अब म ठूलो महसुस गर्छु! मैले प्राप्त गरेको नतिजाले मेरा सबै अपेक्षाहरू पार गर्यो। म धेरै खुसी छु कि तपाईं कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न! सेल्युलाई पनि हरायो। यो व्यक्तिगत जीत हो! म आफैंमा गर्व गर्छु !!! ??? मँ संग मेरो प्रगति रिपोर्टहरु साझा गर्न मा गर्व छ। मेरो प्रोफाइल मा फोटोहरु मात्र हेर्नुहोस् !!!
Sandra Savage लाई जवाफ दिनुहोस्
जोर्डन हुआ। भन्यो
ओ मेरो, यो तथ्य प्रभावशाली छ।
जोर्डन हुआंगलाई जवाफ दिनुहोस्
Bridjet धनी भन्यो
बधाई छ, स्यान्ड्रा! तपाईंको नतीजाहरू शानदार छन्!
Bridjet Rich लाई जवाफ दिनुहोस्
कारमेन मारिया गोन्जालेज मोमबेर भन्यो
कार्मेन मारिया गोन्जालेज मोमबेललाई जवाफ दिनुहोस्
Mariangeles Funes लोर्का भन्यो
के कसैलाई थाहा छ म कहाँ ग्रेनाडा मा थर्मस तय गर्न सक्नुहुन्छ ... धन्यवाद
Mariangeles Funes Lorca लाई जवाफ दिनुहोस्
यहाँ तपाईंसँग खोज ईन्जिन छ। तपाईंले भर्खरै शहर र भोईला राख्नुपर्नेछ!
नुरिया टोरे कुआड्रोस भन्यो
अरब प्रतिनिधिमण्डलमा। के तपाईंको tm5 बिग्रियो? मेरो लागि हो, यो एक मेशीन आलु हो, 31 को तुलनामा
Nuria Torre Cuadros लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरी पेना क्यारोडेगुआस भन्यो
Mery Monforte पेना
Mery Pena Carrodeguas लाई जवाफ दिनुहोस्
Mery Monforte पेना भन्यो
Oii कति स्वादिष्ट, म प्रयास गर्नेछु ??
Mery Monforte Pena लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाइँसँग थर्मोमिक्स, मेरी मोनफोर्टे पेना छ?
रोजा मोनफोर्टे भन्यो
यदि तपाईं एक भाभीमा रुचि राख्नु हुन्छ भने, म गर्दिन। तर मलाई आपत्ति छैन यदि तपाईंले मलाई दिनुभयो भने। धन्यवाद
रोजा मोन्फोर्टेलाई जवाफ दिनुहोस्
रोजा मोन्फोर्टेले घर छोडेर मेरो लिएको थियो, एक दिन पहिले, "उधारो" मा, र उसले मलाई अझै फिर्ता गरेको छैन, उनी भन्छिन् कि मैले यो थोरै प्रयोग गरें, अब मैले यसलाई प्रयोग नगर्दा!!!!!!! ! ?????????
कस्तो राम्रो देखिन्छ! के त्यो चिनी पनीला वा महको लागि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ? त्यस्तो अवस्थामा, राशि कति हुन्छ?
Loli ... म तिमीलाई बुझ्न छैन !!
डोलोरेस नवर्टा भन्यो
तपाईंसँग फोनमा कल गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग करारमा छ वा केन्द्रीय शाखा जुन ग्रेनाडामा छ, तिनीहरू सबै कुराको ख्याल राख्छन्
डोलोरेस नवर्टालाई जवाफ दिनुहोस्
Esme सालिनस भन्यो
तपाईं कहाँ xylitol वा बिर्च चिनी खरीद गर्नुहुन्छ? मेरो जीवनमा मैले सुनेको थिए ...?
Esme Salinas लाई जवाफ दिनुहोस्
जडिबुटी पसलहरूमा, स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरू र इन्टरनेटमा पनि ... जे तपाईंलाई पनि सबैभन्दा सहज छ!
धेरै धेरै धन्यबाद मायरा
गाजर र स्ट्रबेरी क्रीम